MACLUUMAADKA TARANKA CAVACHON DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Cavachon Dog iyo Sawirro
Cavalier King Charles Spaniel / Bichon Frize Isku-dhafan Isku-dhafan Eeyaha
Bob the Cavachon oo 4 jir ah— 'Waxaan ahay Bob waxaan ahay samatabbixin. Bilooyinkeygii hore waxaan ku qaatay qol, laakiin hadda waxaan la noolahay qoys qurux badan waxayna i breen wax walba oo ku saabsan eey. Waan jeclahay banaanka oo waxaan jeclahay helitaanka wasakh ah . '
Liiska eeyaha Cavachon Mix Biritish
Cavachon maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Cavalier King Charles Spaniel iyo Bichon Frize . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
chihuahua / minipper mix mix
ACA = Ururka Canine American Association Inc. = Cavashon
ACHC = Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Cavachon
DDKC = Naqshadeeyaha Eeyaha Keena Naadiga = Cavachon
IDCR = Diiwaanka Canine-ka Caalamiga ah ee Naqshadeeye®= Cavachon
Bella the Cavachon oo halkaan lagu muujiyey iyadoo 6 bilood jir ah— Waxaan ka badbaadinay ilmaheena yar-yar ee dhogorta dhogorta yar ah gabaad ay ku jirto oo ah wax soo saarka eeyaha yar yar ee loo sii raro dukaanka xayawaanka ee CA. Ayada iyo walaalkeed waxay qabeen boronkiito oo kama badbaadeen safarka OH. Waxay u egtahay sidii korsashada cunug — nidaamka arjiga, tixraacyada iyo wareysiyada waxay qaadatay qiyaastii 2 toddobaad in la buuxiyo ka hor inta aan la dooran in aan korsanno. Bella hadda waa xubin caafimaad qabta, faraxsan oo ka tirsan qoyskeenna - iyadu waa farxadda maalintayda.
'Waxaan ku qasbanaanay inay dhigato xanaanada caruurta yar yar iyo tababarka aasaasiga ah si ay u bartaan akhlaaqda qaarkood waxayna aheyd mid gurigeeda ku jabtay qiyaastii 8 bilood. Waxay jeceshahay lafaheeda qaawan oo ceyrsaneysa tilmaameheeda leysarka sida shaqo lowska! Aad ayey u qosol badan tahay markay seexanayso — dhabarka ayey ku jiifsataa santukheeda oo wey isbaddashaa sidaa darteed lugaha gadaasheeda waxay ku jiraan hawada oo lagu dhejiyay siligga qafisyada si ay kor ugu qaadaan! Way jeceshahay ila soco maalin kasta — badanaa 3 ilaa 4 mayl markiiba ... oo iyadu si qurux badan ayey ila socotaa! Wax badan ma daadiso — waxyar uun, oo waxaa loo hagaajiyaa 8-dii toddobaadba mar iyada oo mararka qaarkood guriga lagu maydho inta u dhexeysa goynta. Waxay neceb tahay in cidiyaha laga jaro. Aad ayey u adeecsan tahay (intabadan) waana gabadh yar oo bulsheed ah - waxay jeceshahay inay la kulanto qof walba, 2-lugood ama 4-lugood! Maya sidoo kale yipp-yapp-ma aamusto inta badan illaa aan ka codsano inay hadasho mooyee ama laf ayaan ku xantaan. Waxay jeceshahay inay daweyso 'urinta-daaweynta' - waan qarinaa oo waxaan daawannaa iyada oo sankeeda raaceysa ... WELIGAA way heshaa.
“Waxaan sidoo kale ku dhageysaneynaa buugaagta Cesar Milan oo cajalad ku duuban — xaqiiqdii wuxuu xiiseeyaa tababarka. Waxaan isku daynay inaan ku darno qaar ka mid ah qaababkiisa tababarka joogtada ah. Waxaan isku dayeynaa inaan hubinno in wax kasta oo 2-legger ah oo iyada la socdaa ay had iyo jeer yihiin hogaamiyaha xirmada. Mararka qaar waan ku guul darreysnaa tan, laakiin waan soo fiicnaanaynaa. '
Cavachons Abby (gadaal) 5 bilood iyo Emma (hore) 4 bilood jir
Daisy the Cavachon oo 10 bilood jira, miisaankiisuna yahay 19 rodol
'Riley the Cavachon qiyaastii 4 sano jir — Riley waxay noo timid qeybtii hore ee 2007. Xaaskeyga Karen kansarka wuxuuna wajahayay kiimiko, shucaac iyo qalliin. Waxay go’aansatay inay eey rabto. Aad baan uga soo horjeeday fikradda tan iyo markii aan ahaa kan noqon lahaa socodka eeyga , iyada oo u geynaysa kuwa isqaba, iwm. Hagaag, waxay ku aragtay Riley dukaanka xayawaanka ee magaaladayaga waxayna go'aansatay inuu noqonayo eygeeda. Waxaan idhi maya.' Waxay tiri, 'waa aniga ama eeyga.' Waxaan ku iri: haa.
'Karen waxay dhimatay bishii Sebtember 2009 waxaanan u arkaa Riley inay tahay hadiyaddaydii ugu dambaysay ee iyada ka timaadda. Isagu wuxuu ii ahaa ilo aad iyo aad u raaxo iyo farxad badan. Weligey kuma xirmin xayawaan sidii aan ula macaamilay Riley. Wuu ila safraa si uu u shaqeeyo inta badan waxaana jecel dadka ila shaqeeya iyo macaamiishayada.
Waxaan u arkaa Riley inuu yahay eeyga ugu fiican, oo isku daraya kuwa ugu fiican Bichon Frize iyo dabeecadda Cavalier King Charles Spaniel . Wuu aamusanyahay oo wuu jecel yahay isagoon baahan. At 19 lbs. oo leh timaha hypo-allergenic waa sahlan tahay in guriga lagu haysto. Waxaan u geystaa ninka hagaajiya si loogu daaweeyo dalxiiskiisa 7 ilaa 8 toddobaad kasta. Riley waa eey weyn iyo wehel fiican.
Riley Cavachon qiyaastii 4 sano jir
Abby the Cavachon (Cavalier / Bichon mix breed puppy) markuu jiro 12 toddobaad
Emma Cavachon (Cavalier / Bichon mix brew puppy) 4 bilood jir
Lahaanshaha sawirka Timshell Farm
Cavachon eey, xushmad sawir leh Beerta Timshell
Maximus oo ah 6 bilood jir Cavachon
dogue de Bordeaux feeryahanka isku darka
Sammy the Cavachon eey yar oo qiyaastii 2 bilood jir ah (Cavalier King Charles Spaniel / Bichon Frize mix)
Sammy Cavachon oo 12 bilood jira (Cavalier King Charles Spaniel / Bichon Frize mix)
Cavachon Sawirada 1
i tusi sawir ah yorkie teacup a
sida ay u weyn yihiin eyda jilicsan
silig Pit dawaco lehba qas chihuahua
iskudhafka eyda dotson ee chihuahua
bakoorad corso pitbull puppy puppy
sawirrada bogsiiyaha buluugga ah